19 Qof Oo Ku Dhimatay Shil Tareen Oo Ka Dhacay Dalka India
19 Qof Oo Ku Dhimatay Shil Tareen Oo Ka Dhacay Dalka India 0 August 05, 2015 in Wararka by Wariye Dalmar Visits: 434
Inta la ogyahay 19 qof ayaa ku dhinatay shil tareen, kaddib markii laba tareen oo ah kuwa rakaabka qaada ay ka baxeen khadkii ay ku socdeen daqiiqado gudahood bartamaha dalka India. Saraakiisha ayaa sheegaya in dhowr boqol oo qof la soo badbaadiyay.
Inta la ogyahay 19 qof ayaa ku dhinatay shil tareen, kaddib markii laba tareen oo ah kuwa rakaabka qaada ay ka baxeen khadkii ay ku socdeen daqiiqado gudahood bartamaha dalka India. Saraakiisha ayaa sheegaya in dhowr boqol oo qof la soo badbaadiyay. 19 Qof Oo Ku Dhimatay Shil Tareen Oo Ka Dhacay Dalka India
India- (SLL)- Inta la ogyahay 19 qof ayaa ku dhinatay shil tareen, kaddib markii laba tareen oo ah kuwa rakaabka qaada ay ka baxeen khadkii ay ku socdeen daqiiqado gudahood bartamaha dalka India. Saraakiisha ayaa sheegaya in dhowr boqol oo qof la soo badbaadiyay.
Shilkan ayaa dhacay markii tareen lagu magacaabo Kamayani Express oo ku socday magaalada ee Varanasi, uu ka baxay khadkii uu marayay, isagoo marayey buundo dulmarta webi mara gobolka bartamaha ee Madhya Pradesh.
Daqiiqado gudahood ayaa tareen kale oo dhinac kale u socday isna sidoo kale uu khadka uga baxay.
Shilka ayaa la sheegay in uu sababay fatahaado ka dhashay roobab halkaasi ka da'ayay.
Howlaha samatabixinta ayaa wali halkaasi ka soconaya.
Shilalka tareenada ayaa waxay mar walba ka dhacaan dalka India iyagoo sababa dhimasho iyo dhaawac nafeed.